musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Hakuna Gamba rakasiiwa paZuva Rekushanya reNyika 2021
Inowanikwa Yekushanya • African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • ICTP • Interviews • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Kuvakazve • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Wtn
IWorld Tourism Network inongova nemwedzi gumi nesere chete, asi vatungamiriri vatsva vari kubuda muindasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya.
Mazhinji acho anozivikanwa semagamba echokwadi ekushanya neWorld Tourism Network - asi ndivanaani?
The World Tourism Network (WTN) ine nhengo munyika zana nemakumi masere nesere uye yakabuda kubva mu kuvaka.travel hurukuro.Heroes.travel ndiyo yemahara mubairo uye chirongwa chekucherechedzwa neWTN kukudza avo vakaita mutsauko.
Sekureva kweUNWTO, rino reWorld Tourism Day 2021 ndere kubatanidzwa mukushanya. WTN inovimbisa izvi zvinosanganisira ese magamba asina mazita.
Iwo magamba chaiwo ndeavo vaive vasina bhizinesi panguva yedenda uye vachiri kutenda muindasitiri yekufamba neyekushanya. Iri boka risingazivikanwe rakapihwa iyo Anonomyous Tourism Gamba Mubairo. neWorld Tourism Network nhasi.
”Magamba chaiwo mumoyo mangu asina mabasa kwemwedzi gumi nemasere uye akararama.
Zvisinei zvisingaoneki ivo - vari pakati pedu, asi vanogona kunge vasina izwi. Ndiri kuda kuti vatiteerere, vauye kumberi, kuti tigovarumbidza nekupona kwavo uye kuramba vachirarama, uye kuve vamwe veindasitiri yedu huru. Zuva reWorld Tourism Day 2021 raive pamusoro pekubatanidza, uye boka iri rinofanira kuverengerwa. ” akadaro Marikar Donato, mubatanidzwa wemubatanidzwa weWorld Tourism Day chiitiko cheWTN uye gamba rekushanya iye.
Akawedzera kuti: "Kune zviuru zvemagamba ekushanya asingazivikanwe."
Muvambi uye Sachigaro weWorld Tourism Network akawedzera: Ndinodada naMarikar kuuya neAnonomyous Tourism Hero mubairo, wekutanga munyika ino.
Izvo zvinokurumidza, isu tinoziva aya magamba asingazivikanwe. Ther vari kwese kwese.
Dzimwe nguva tinoziva kuti aya magamba ndiani. Isu takave nemamiriro ezvinhu vanhu vaisada kudaidzwa semagamba. Vakanzwa izvo zvavanenge vasingafanirwe kugoverwa neruzhinji.
Ndiri kufara kuzivisa, iyo World Tourism Network ndiro rekutanga kushanya kwepasirese musangano unoona kukosha kwekuisa aya magamba asingazivikanwe kumberi.
The kusazivikanwa kwekushanya gamba mubairo yakawedzerwa zviri pamutemo ku magamba.travel portfolio.
WTN co-muvambi Dr. Peter Tarlow akabvuma ndokuti:
“Tourism inoumbwa nezviuru zvevanhu vanogadzira zvisungo zvisina udyire pakati pevanhu, tsika nemarudzi.
Aya nyeredzi dzekushanya ndiwo maindasitiri magamba asina kuzivikanwa anounza mwenje kupasi rakazara nerima.
Sangano reWorld Tourism Network rinotsvaga kuburitsa magamba ekushanya aya. Sokutaura kwakaita Dr. Peter Tarlow, akabatanidzwa pamwe chete weWorld Tourism Network akati: “kushanya kunopfuura kungoita zveindasitiri, mubatanidzwa wezvinotarisirwa pamweya, kudyidzana kwemweya neicho chokwadi chenyika.
Magamba ezvekushanya ndeavo vanobatanidza hunhu nezvinobatika uye nekusanganisa hunhu hwedu nenyika yekufamba ”Tarlow anotiyeuchidza kuti magamba ezvekushanya anomiririra akanakisa pakati pedu tese uye kudzidza pamusoro peumwe neumwe rwendo kuenda mukudzika kwekusika nekutarisira. ”
Marikar Donato ndeye Washington DC Yekushanya Gwara uye mukuru muNyika Sangano reVashanyi Rinotungamira Sangano (WFTGA)
Nhasi uno World Tourism Network yakapemberera zvakare magamba ayo anozivikanwa. Gamba rega rega rinozivikanwa neWTN raita chimwe chinhu chinopfuura izvo zvinogona kutarisirwa kuburikidza nedenderedzwa re COVID-19.
Dr. Taleb Rifai, aimbova maviri-term term UNWTO Secretary-General akagamuchira magamba kubva kumba kwake kuJordani. Tourism Gamba Mary Rhodes, purezidhendi weGuam Hotel & Restaurant Association akamuka na4 mangwanani kuti apinde musangano wepasi rese wekusimudza magamba nemakondinendi ese.
Dr. Walter Mzembi, vaimbova gurukota rezveKushanya kubva kuZimbabwe vakayambira kuti nyika yakavharwa, uye mirau yekudyidzana iri kuparadza nzira dzevatungamiriri vezvekushanya dzakarwa kwemakore makumi maviri.
Alain St. Ange, purezidhendi we African Tourism Bhodhi, uye vaimbova gurukota rezveKushanya kubva kuSychelles vaive neshoko rekubatana kweAfrica.
Aleksandra Gardasevic Slavuljica, director we Tourism yeiyi nyika yeBalkan aive chikamu cheWTN kubva pakutanga. Akaitwa gamba rekushanya nekuda kwebasa rake mukuunza dunhu reBalkan pamwechete. Aitsigirwa na Tourism Gamba Klodiana Gorica, akazara Muzvinafundo paYunivhesiti yeTirana, Ruzivo rweEconomy, muAlbania.
Inzwa kubva Dr. Snežana Štetić ane anga achishanda mu Tourism uye mudzidzo ye Tourism kwenguva inopfuura makumi mana emakore uye ari mukuru weboka rekufarira, pamwe nekutungamira yepamusoro-soro Balkan Boka reWorld Tourism Network.
Deepak Joshini, gamba rekushanya kubva kuNepal, uye aimbova CEO weNepal Tourism Board akapa mhinduro yake pamusoro pekuvhurwa kwekushanya kwenzvimbo yeHimalaya.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman weSunX uye iyo International Climate uye Tourism Kubatana (ICTP) yakayeuchidza nyika nezvekutyisidzira kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tourism Gamba Mouhamed Faousuzou DEME kubva kuSenegal akagovana meseji yake yetariro, kuvimba, uye kukurudzira nenyika yekushanya. Iye zvakare mumiriri weAfrican Tourism Board, uye technical Advisor weGurukota rezveKushanya uye Kutakura Kwemhepo yeSenegal.
Tourism Gamba uye CEO we Inotevera Boka LLC muAzerbaijan, Efsun Ahmadov, Baku, muAzerbaijan ndainzwa zvirinani mushure mechiitiko chisina kunaka che COVID.
Tourism gamba Diana McIntyre-Pike akapa chiitiko pakubatana kwake kutsva negamba rekushanya Edmund Bartlett, gurukota rekushanya muJamaica. Diana igamba rekushanya uye mutungamiri munharaunda yekushanya muJamaica.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nigeria ndiye mubatanidzwa weiyo ichangobva kusimbiswa African Association yeVakadzi MuKushanya uye Kugamuchira Vaeni muNigeria. Iye anogara zvese muUnited States neNigeria.
Tourism Hero Joseph Kafunda ndiye Sachigaro weEmerging Tourism Enterprise Association uye nhengo yeWorld Tourism Network iri kuNamibia. Akabatana kubva kuBotswana.
Dr. Peter Tarlow, mubatsiri weWorld Tourism Network vakapedza chiitiko ichi nemunamato wekutenda kwakawanda.
Iko hakuna kumbobhadhariswa kudoma kana kugamuchira kuzivikanwa kweHeroes neWorld Tourism Network. Zvinotora hushoma pamasarudzo akazvimirira maviri anotariswa pamubairo uyu. Mamwe mashoko pamusoro www.mapfumo.travel